IZiko lePalandoken Ski lilungele ukwamkela abathandi baseSki | RayHaber | Uloliwe | Indlela enkulu | imoto cable
ikhayaETURKEYUmmandla waseMpuma Anatolia25 ErzurumIZiko lePalandöken Ski lilungele ukwamkela abathandi be-ski
IZiko lePalandöken Ski lilungele ukwamkela abathandi be-ski
07 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 25 Erzurum, Ummandla waseMpuma Anatolia, JIKELELE, ZOMHLATHI, ETURKEY, TELPHER 0
I-palandoken ski resort ilungele ukwamkela abathandi be-ski
IZiko le-Erzurum Palandöken Ski likulungele ukubamba abathandi be-ski kunye nehotele yayo ye-5, i-9 bungalow indlu kunye nendawo eyandisiweyo ye-ski kunye neekonsathi kunye nemibutho eza kuvulwa kwixesha elitsha.
Natural Environmental Iimpawu intshukumo ukhenketho Winter ngokubhekiselele kwiindawo ezinkulu Ski Turkey kweli isidanga sokuqala nokuba 3185 Ma kwincopho Palandöken Mountains, ebekwe ngezantsi kwiphondo Erzurum luqhubeke ulwalathiso empuma-ntshona. Iintaba zePalandöken zigubungela indawo emalunga ne-70 km ubude kunye ne-30 km ububanzi. Ukuphakama kweentaba kuqala ukusuka kwi-2000 m ukuya kwi-3176 m. Nge-3176 m, iBig Ejder Tepe, ebeka eyona ndawo iphakamileyo yeeNtaba zePalandöken, kunye ne-3095 m, iKüçük Ejder Tepe inyukela emazantsi embindi wesixeko sase-Erzurum kunye nomda osemazantsi we-Hınısboğazı ski.
Iintaba zePalandöken, ezibonelela uluhlu lweentaba eziphakathi, zihlala ziludlolo ngaphandle nje kweendawo ezikhuselweyo kunye neendawo ezinamahlathi. I-Steppe kunye ne-shrub zihlala zigubungela. Ngenxa yokhukuliseko oluphezulu, kwavela indawo yokuma komhlaba apho amathambeka axutywe ngequbuliso neeflethi ezivelayo. Njengoko ihamba iye phezulu ngakumbi, i-topografikhi iyatshintsha ngezitya zayo ezinkulu kunye neeperesi ezime umda.
I-Erzurum ijikelezwe ziintaba kwaye inemozulu ebandayo. Enye yezinto ezenza ukuba kukhenketho lwexesha lasebusika ixesha elide i-Erzurum ngokungathandabuzekiyo ziimpawu zayo zemozulu. I-Erzurum inemozulu ebonelela ngentuthuzelo ye-bioclimatic ngenxa yokuphakama okuphezulu kwaye inefuthe lokuphucula ukusebenza. Ixesha lokhenketho lasebusika ePalandöken yi-N 150 usuku / unyaka ”kwaye igubungela uDisemba, kuJanuwari, ngoFebruwari, ngoMatshi nango-Epreli. Kwiimeko eziqhelekileyo zobusika iqhwa elinekhephu kwimimandla ye-ski idlula i-2 m. Umgangatho weqhwa ubaluleke kakhulu kwimisebenzi yokushushuluza. Njengokwenyani, ikhava lekhephu lifanele liwele ngohlobo lwekhephu ekhephu, ingabi ngumkhenkce okanye ikhephu elimanzi, ukuze kudaleke amathuba okufumana umvuzo. Umgangatho weqhwa ePalandöken uphezulu kakhulu, kodwa unomgangatho weqhwa lomgubo ngenxa yokuma kwawo komzimba.
Snow umgangatho qhwa kwepropati, ulawula iziko yasebusika ukhenketho Palandöken imeko ngcono kunezinye amaziko yasebusika yokhenketho ezikhoyo Turkey. Ngaphandle kwembonakalo yekhephu elikhaliphile, inani leentsuku ezinelanga elibonwe unyaka wonke ziphakathi kwezibonelelo zokuhamba ngeenyawo kunye nobusika bezemidlalo e-Erzurum. Kwangelo xesha, inyani yokuba amaziko e-ski aphantse abe yimizuzu ye-20 kude nesikhululo senqwelomoya yenye yezona zinto zibangela ukhenketho lwasebusika lube nomtsalane e-Erzurum.
Le yokuqala Iprojekthi kakhulu kwaye olubanzi Palandöken Ski Center for lokhenketho ubusika Turkey "Erzurum kaThixo Palandöken Winter Sports and Tourism Plan Master 'isifundo. Kolu phononongo, kwagqitywa ekubeni iiNtaba zePalandöken zibe neempawu zeziko lemidlalo lasebusika lamanye amazwe ngesakhiwo sayo sendalo kunye nemozulu embi. Kule projekti, kucingelwa ukuba inani elipheleleyo labantu abayi-32 lamawaka banokuhamba ngeenyawo kwiindawo ezintathu, ukhuphiswano lwamanye amazwe kunye ne-olympics ebusika inokulungelelaniswa, kwaye abantu be-6 amawaka abantu banokuqeshwa ngokuthe ngqo.
Isicwangciso seMidlalo yoBusika ye-Erzurum-Palandöken kunye ne-Tourism (1991) sichonge iindawo ezintathu zokuphumla ski kwiphondo. Zonke ezi zikumazantsi eentaba zePalandöken. Le mimandla yile; Indawo ye-Hınıs-Palandöken Strait, indawo ye-Gez Plateau kunye ne-Konaklı. I-25 ukuya kule mimandla igutyungelwe sisicwangciso sobuchule. Xa sibandakanya uMmandla waseKandilli ophuhliswe ngaphakathi kobume beMidlalo yeHlabathi yeYunivesithi yase-Intanethi, sinokubeka amaziko okhenketho e-Erzurum kwicandelo eliphambili le-4. I-Hınıs-Indawo ye-Palandöken Strait: Ikwi-Erzurum Strait (ekwabizwa ngokuba yi-Hınıs Strait kunye ne-Tekman Strait) ekumazantsi e-Erzurum kunye ne-5 km. Le ndawo, eyaziwa njengePalandöken Ski Resort, ibandakanya i-Ejder Hill kunye neendawo eziyingqongileyo kwiintaba zePalandöken. IZiko lePalandöken Ski libe yenye yezona ndawo zibaluleke kakhulu kubakhenkethi belizwe lethu nezixhobo zazo zentshinyela, imigama emide nebanzi, indawo yokuhlala kunye neendlela zoomatshini apho ululeko lweAlpine lunokusetyenziswa ngokulula.
Imisebenzi yemidlalo yasebusika ifumaneka kwi-2200-3176 imitha yokuphakama kweZiko lePalandöken kwaye iqhutywa kwiNamlıkar, iHınıs Strait, Konaklı, Ülkeroğlu kunye neYaqmurcuk kwimimandla ukusuka emantla ukuya emazantsi. IPalandöken yenye yezona ndawo zokuzimela ezikufuphi emhlabeni kunye nomgama wayo we-5 km kumgama we-Erzurum. Indawo ye-ski ihlala i-25 - imizuzu ye-30 kude nesikhululo seenqwelomoya i-Erzurum.
I-ski ebaleka kwiPalandöken Ski Resort iphakathi kweyona ndawo ibaleki kakhulu yehlabathi. I-Palandöken Ski Resort ine-27 ski run yeemigangatho ezahlukeneyo zobunzima, kubandakanya i-International Ski Federation (FIS) evunyiweyo yindawo etyibilikayo, apho inyibilikisi inokuthi ikwazi ukuhamba ski. Owona mda mde mkhulu yi-12 km kwaye ubude bugcwele bethambeka yi-28 km. Umahluko phakathi kokuphakama nokuphela kwayo ziimitha ze-1100. Iindlela zokubaleka ze-Ejder kunye neKapıkaya zibhengezwe njengerejista yeOlimpiki ebhalisiweyo yokhuphiswano lweSlalom kunye neGrand Slalom. Ukhuphiswano lweSlalom kunye neGrand Slalom lubanjwa kwezi thambeka kwaye ziphakathi kwethambeka elithandwayo phakathi kwamaziko e-ski.
Kukho i-chaNight ye-5 ye-chairlifts (i-4500 yomntu / umthamo weyure), i-1 chairlift (umthamo we-300 / umthamo weyure), ukuphakama komntwana kwe-2 (inani elipheleleyo le-1800 yomntu), i-1 gondola lift (i-1500 umntu / umthamo weyure). I-Palandöken iququzelela ukhuphiswano lwe-ski kunye ne-snowboard kunye nemikhosi yeqhwa kwiindidi ezahlukeneyo. Ukongeza, kukho iindawo ezine zabakhenkethi entabeni, enye inkanyezi ye-5 kunye ne-3 4 star, kunye nendlu ye-ski, indawo yemihla ngemihla kunye neeresityu. Umthamo webhedi okhoyo kwindawo ekuchithelwa kuyo ski imalunga ne-2000.
kubaluleke kakhulu Turkey yaye kwelinye lamaziko yokhenketho iphambili zasebusika Palandöken Mountains ngenxa izifundo olwenziwe luluntu kunye namacandelo abucala, Ukuskiya neentshukumo zasebusika ukhenketho njengento isikhululo ngamazwe ixubile kwelo cala. Kwelinye icala, kuyabonakala ukuba abakhenkethi basekhaya bakhulu kakhulu kunenani labakhenkethi bangaphandle. Unxibelelwano lwabathengi uninzi lwabakhenkethi bangaphandle abatyelele iPalandöken ngabakhenkethi abasuka e-Ukraine, Russia, Iran, Azerbaijan, Georgia nase-Middle East. I-25 lulwakhiwo lwentaba etyhutyha ngokwenyani ePalandöken. Imidlalo yeHlabathi yeYunivesithi yaseBusika ye-Intanethi yaqala nge.
I-Konakli: kumazantsi-ntshona e-Erzurum kunye ne-18 km ukuya kumbindi wesixeko. Ifumaneka phakathi kwedolophana yaseKonaklı (2200 m) kunye nentaba yeKırkulak (3084 m), iziko le-ski lilungele kakhulu ukhuphiswano lwaski lweAlpine kunye nokhuphiswano lwasimahla. Okwangoku i-25. Ngaphakathi kwinqanaba leMidlalo yeHlabathi yeYunivesithi yasebusika ye-Intanethi, kukho iindlela ezibaleka ze-460 ezigubungela ummandla opheleleyo weehektare ze-11 ezilungiselelwe uqeqesho lweAlpine nohlanga lwe-slalom. Nangona umhlaba uqukwa ziindawo ezahlukeneyo zentshinga, kodwa kubalulekile ukuba iKonaklı inike ithuba lokudala unxibelelwano phakathi kwezi ndawo.
IGez Plateau: Iziko lemidlalo lasebusika laseGez Plateau likububanzi be2200-2770 m kunye ne-7 km empuma ye-Erzurum. Ihektare ye-54 ineemingxuma ezintathu ezibanzi ukusuka kwiincopho ukuya kuthi ga mpuma-mpuma. Indawo etyibilikayo iphakathi kwe2150 m kunye ne-2750 m. Ifanelekile ukushushuluza i-alpine kunye nokushushuluza i-ski. Nangona kunjalo, azikho izifundo ezenziweyo eGez Plateau ngokwemidlalo yasebusika.
I-Kandilli: I-Kandilli Ski Resort, i-25. Yenzelwe ukusebenzela ukhuphiswano lwe-biathlon kunye ne-ski jogging ngaphakathi kwinqanaba leMidlalo yoBusika yeHlabathi yeYunivesithi. I-Kandilli Ski Resort yakhiwe kwi-160 ha terrain kwaye amathambeka abekwe kwindawo ephezulu ye-1713-1767 m. I-36 km ukusuka kumbindi wesixeko. Away. I-Kandilli ineziko lokushushuluza, indawo etyibilika ski enamanqanaba obunzima obahlukeneyo, indawo yokutshixela kunye namathambeka e-biathlon.
Ihotele ye-Boutique neCandelo le-30 ukuya kwiziko lezemidlalo lasePalandoken
I-Erzurum Palandöken Indawo yokuLungisa uLawulo lwaqalisa
I-Palandöken Logistics Centre Utyalo-mali Inani le-105 Million TL
KwiZiko Logistics lasePalandöken
I-Palandöken neKonaklı Faka iNyanga ngeendaba ezilungileyo
Apaydın, Isikhululo sase-Erzurum kunye nePalandöken Logistics…